Nepali Rajneeti | ओलीले हँसाए : मेरा लागि सत्ता प्रमुख होइन, नैतिकताको चिन्ता हो !
ओलीले हँसाए : मेरा लागि सत्ता प्रमुख होइन, नैतिकताको चिन्ता हो !
जेठ १५, २०७८ शनिबार ८० पटक हेरिएको
सम्वोधनको अन्त्यतिर पुग्दा प्रधानमन्त्री ओलीले त्याग, नैतिकता, विधि पद्दति र लोकतन्त्रको चर्चा गरे । प्रधानमन्त्रीले भने, ‘नीतिहीन गठबन्धनको भर्याङ चढेर सरकारमा जान खोज्नु भनेको अराजनीतिक झेली काम हो । जनताप्रति अविश्वास गर्नु हो ।…. मेरा लागि सत्तामा रहनु या नरहनु प्रमुख विषय हुँदै होइन ।
आजको मुख्य चिन्ता अलोकतान्त्रिक, नैतिकमूल्यहीन र विकृत अभ्यास झाँगिदै गएर लोकतान्त्रिक गणतन्त्रप्रतिको जनविश्वास नै गुम्ला कि भन्ने हो ।’ रातोपाटीवाट